Renaissance, Albumka cusub ee Beyoncé, horay u lahaa taariikhda la sii daayo | Bezzia
Maria vazquez | 19/06/2022 22:00 | Wararka
Beyoncé ayaa si kooban ugu dhawaaqday todobaadkan Bilawga Renaissance. Shaqadan cusubi waxay imanaysaa lix sano kadib ilaa taariikhda albamkiisii ​​ugu dambeeyay ee Lemonade kaas oo loogu magacaabay albamka ugu wanaagsan sanadka ee Grammys wuxuuna ku guulaystay abaalmarinta albamka muusiga magaalada casriga ah ee ugu wanaagsan.
Dhaqdhaqaaqyada ku jira shabakadaha bulshada fanaaniinta ayaa inta badan saadaaliya ogeysiis muhiim ah. Beyoncé ma ahayn mid ka reeban. Wax kastaa waxay ahaayeen xeelad lagu soo bandhigayo Sharciga Renaissance 1, qaybta koowaad ee albamka oo lagu daabici doono dhawr fal. Ku taariikhaysan 29 LuulyoMiyuu jiraa qof ka shakisan inay wax badan siin doonto in laga hadlo?
Beyonce waa kan fanaanka ugu badan ee Grammy Awards taariikhda, 48 guud ahaan. Taariikhdeeda dheer ee guusha leh waxay ka dhigan tahay in xayeysiis kasta uu si toos ah u yeesho saameyn caalami ah. Dhawr kelmadood oo qoran, fannaanku wax kale uma baahnin qof walba si uu uga hadlo soo noqoshadan la sugayey.
2 mashaariicdiisii ​​ugu dambeeyay
Maxaan ka ognahay Renaissance maanta? Marka laga soo tago xaqiiqda ah in falka ugu horreeya la sii deyn doono Luulyo 29, wax kale ayaa ka dhacay shaqadan. taas uun baan ognahay Waxay ka koobnaan doontaa 16 heesood waxyoonay oo la curiyey ilaa 2020.
In fanaanku uu ka shaqaynayey shaqadan cusub dhowr sano maaha wax cusub. Wareysiyo la qaaday sanadkii hore, fanaanada ayaa ku xaqiijisay inay xirneyd sanad iyo bar ayaa ku jira istuudiyaha. Isaga oo ka hadlaya yoolkiisa shaqadan cusub, ayuu faallo ka bixiyay: "Dhammaan go'doominta iyo caddaalad-darrada sannadkii hore, waxaan u maleynayaa inaan dhammaanteen diyaar u nahay inaan baxsadno, safarno, jacayl iyo qosol mar kale." "Waxaan dareemayaa inay jirto dib u soo kabasho, waxaana doonayaa inaan qayb ka noqdo hurinta baxsadka si kasta oo aan awoodo. ", ayuu raaciyay.
Waa inaan sugno ilaa Luulyo 29 si aan u dhageysano qeybta koowaad ee mashruucan cusub ee muusiga. Laakiin, ma aha wax aad u badan si aad u hesho tafaasiil badan oo badan oo kan ku saabsan, ama si aan rajaynayno!
mashaariicdiisii ​​ugu dambeeyay
Xaqiiqda ah in lix sano ay ka soo wareegtay markii Beyoncé ay daabacday shaqadeedii ugu dambeysay, macnaheedu maaha in la joojiyay. Tan iyo 2006 fanaanku waxa uu ka qayb qaatay mashaariic kala duwan sida Carter, mashruuca muusiga ee ay la wadaagto ninkeeda Jay-Z. Oo ay ku sii daayeen albamka wax walba waa jacayl 2018.
Hal sano ka dib, fanaanku wuxuu sameeyay oo uu cod ku siiyay dhowr heesood oo ah nooca cusub ee Disney classic The Lion King. Marka laga reebo fannaanka, xiddigaha kale sida Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrel Williams ama gabadheeda Blue Ivy ayaa iska kaashaday. Mid ka mid ah heesaha muusiga, Black Parade, ayaa ku guulaysatay Grammy 2021 waxqabadka R&B ee ugu wanaagsan, taasoo siisay Beyoncé 28-aad gramophone-ka dahabka ah.
Isla sanadkaas fanaanka wuxuu siiyay cod inuu noolaado, hees ka mid ah hees-qaadka Habka Williams. Beyoncé waxay furtay Abaalmarinta Akadeemiyada 94-aad iyada oo soo bandhigtay mawduucan maxsuulka teniska ee Tragniew Park ee Compton, oo ay weheliyaan Blue Ivy Carter, atariishooyinka King Richard, Saniyya Sidney iyo Demi Singleton, iyo Compton Cowboys Junior Equestrians.
Fanaanku waxa kale oo uu la kaashaday fanaaniin kala duwan sida fanaanada Megan Thee Stallio Isku-darka Savage ee 2020 ama Nicki Minaj oo ay la wadaagtay 2021 bilaa cillad,
Tan iyo markii ay caan ku noqotay dabayaaqadii 1990-meeyadii iyada oo ah heesaaga hormuudka u ah kooxda gabdhaha R&B ee Destiny's Child, Beyoncé xirfaddeedu waa ay kortay oo keliya. Sannadkii 2014-kii, waxa lagu daray liiska majaladda Time-ka 100ka qof ee ugu saamaynta badan aduunka iyo March 14, 2021, inta lagu guda jiro xafladda Abaalmarinta Grammy, waxay samaysay taariikh iyadoo noqotay fanaanada dumarka ah ee ugu abaal marinta badan taariikhda iyadoo wadata 28 abaal-marin.
Intii lagu guda jiray marxaladeedii ugu dambeysay, fanaanadu waxay sidoo kale dib u xaqiijisay nafteeda inay tixraac ahaan u tahay halganka beesha madow ka dhanka ah cunsuriyadda. Dareenkan, 2020 wuxuu soo bandhigay 'Black Is King', albamka muuqaal ah oo sharfaya halganka bulshada madow oo laga arki karo Disney +.
Ma rabtaa inaad maqasho waxa ka cusub Beyoncé?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Renaissance, albamka cusub ee Beyoncé, ayaa hore u lahaa taariikhda la sii daayo